Ahịa YiWu - Yunis International Trading Co., Ltd.
Yiwu flower ifuru ahịa dị na mmanụ mba ahia obodo district 1 ala mbụ. Ohere mepere site na elekere 9:00 nke ụtụtụ ruo n’elekere isii nke ehihie. ọ nweela ihe karịrị ụlọ ahịa 1000 na-ere ụdị ifuru dị iche iche na ngwa furu efu nke .....
Akpa Yiwu akpa na akwa akpa dị na 1e nke ụlọ nke Yiwu mba azụmaahịa obodo District 2, nke ga-emepe 9 amto 5:30 pm E nwere ọtụtụ narị ụlọ mmepụta ihe na ọtụtụ puku ụlọ ahịa na akpa Nyawu na ahịa igbe ......
Ahịa nke Yiwu dị n’ime ọrụ internatial Trade city district 3, ọ na - emepe site n’elekere 9 nke ụtụtụ ruo 5:30 nke abalị. Ahịa a karịrị narị ndị ahịa 10000, tinyere ụdị dịgasị iche iche na ihe dị iche iche dịka nwoke ukwu, belt nwanyị, ezigbo akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ. , akwa akwa na akwa linen, akwa PU, bel na PVC na ndị ọzọ ......
Azụ ahịa Yiwu Futian, nke a na-akpọkwa ahịa azụmaahịa mba Yiwu, dị n'etiti etiti Zhejiang. N'akụkụ ndịda ya bụ Guangdong, Fujian na Yangtze osimiri mgbochi dị na ọdịda anyanwụ. N'ebe ọwụwa anyanwụ ya bụ obodo kachasị ukwuu - Shanghai, chere ihu na ọwa ọlaedo Pacific. Yiwu ugbu a bụ ngalaba akụrụngwa kasịnụ n'ụwa. Ekpebiri ya dịka mba ụwa buru ibu site n'aka UN, ụlọ akụ ụwa na ndị ikike ụwa niile ......
Ahịa ụmụaka nke Yiwu bidoro site na njedebe 1980s. Na mbido, ngalaba azụmaahịa bụ isi na mpaghara azụmahịa mba ụwa 1.Ọ nwere ụlọ ahịa 2250, mpaghara azụmahịa karịrị 20000 square. Ọ dị n'ọtụtụ buru ibu ma ka abawanye. E nwere ọtụtụ puku ihe egwuregwu ụmụaka n'ahịa ahụ. N ’ngwongwo ndị e si Yiwu ebubata, ihe egwuri egwu were 60%. Dị ndị China na ndị International na-edobe aha franchisees na Yiwu ụmụaka. A na-ebubata ihe ụmụaka ji egwuri egwu buru ibu gaa China na ihe karịrị mba 200 na mpaghara ndị dị na mba .....
Ahịa ọdụwu nke dị na Yiwu dị na mpaghara azụmahịa azụmaahịa obodo 3, ala nke abụọ, ahịa mepere site na elekere 9:00 ruo 5:30 pm.The ahịa nwere karịa ụlọ ahịa 3000 ụlọ ahịa. Ngwaahịa gụnyere: pen, mpempe akwụkwọ, akpa ụlọ akwụkwọ, nchicha, pensụl pensụl, akwụkwọ ndetu, mkpado akwụkwọ, akwụkwọ akwụkwọ, mmiri mgbazi ......
YIWU AKW TIMEKWỌ AKW OPKWỌ MARKET
Etu akpụkpọ ụkwụ Yiwu dị ugbu a, a kpọgharịrị ya na mpaghara NO.4 nke obodo azụmahịa mba ụwa. Ọ bụrụ na ịnọ n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè, mgbe ahụ ị nwere ike site na 801 na 802 ịbịa n’ahịa a
Oge Emewu Egwuregwu Yiwu akpụkpọ ụkwụ na elekere 9:00 ruo 18: 00.Here ị nwere ike zụta ma ọ bụ ịtụ ụdị ọ bụla na ụdị dịgasị iche iche ịchọrọ.
ahịa ịchafụ na ajị anụ ụlọ nke dị na Yiwu International Trade city district 4, ahịa ịchafụ na shawls Oge mmeghe bụ elekere 09:00 - 18:00 ......
Otu n'ime ngwaahịa ndị dị na ahịa ahịa bụ ọla. Azụta ọla nke Yiwu dị na ala nke abụọ nke mpaghara azụmaahịa mba ụwa 1. find nwere ike ịchọta ngwa ọ bụla dịka akwa isi, ọla ntị, olu, mgbaaka, mgbaaka, ọla, ihe ịchọ mma na ihe ndị ọzọ ......
Ahịa nke Nyawu huangyuan dị na mpaghara azụmaahịa xiuhu bara ụba, na-ekpuchi mpaghara 117mu, nke gụnyere mpaghara 42 square nke mpaghara ụlọ, na ntinye ego nke ijeri 14, a na-etinye ya n'ọrụ site na Eprel, 2011. Yiwu huangyuan ahịa ahịa oge site na 7:30 elekere ruo 20:30 na abalị ......